सरकार, खै खोप ?
निषेधाज्ञाले ७५ जिल्ला ठप्प रहेकै बेला सार्वजनिक गरिएको बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अगाडि सारेको मुख्य आधार ‘सबै नेपालीलाई खोप’ थियो । खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले चाँडै नै खोप खरीदबारे ब्रेक थ्रु हुने भनेर भनेका थिए । तर, अहिले त खोपको नामोनिसान सुन्न छाडिएको छ । सरकारले कोरोनाविरुद्ध खोप चाहिन्छ भन्ने नै बिर्सियो कि क्या हो ?
प्रधानमन्त्रीले ३ महीनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यो घोषणा गरेको महीनौं बित्दा पनि एक डोज खोपसमेत सरकारले किन्न सकेको छैन । खरीद सम्झौता त परको कुरा कम्पनी छनोट गरेर वार्तासमेत गरेको छैन । यसको असर आगामी आर्थिक वर्षमा पर्ने छ ।
राज्यको भनाइ एकातिर र गराइ अर्कोतिर छ । निषेधाज्ञा निकै खुकुलो त भएको छ तर संक्रमणको दर र मृत्युको संख्या घट्दै गएर फेरि बढ्न थालेको छ । खोपविना कोरोना नियन्त्रणमा आउन नसक्ने स्पष्ट छ ।
अहिले कोरोनाको तेस्रो लहरको चिन्ता शुरू भएको छ । सरकारले नागरिकको ज्यानको रक्षाका लागि निषेधाज्ञाको घोषणाबाहेक केही गर्दैन भन्ने सबैले थाहा पाइसकेका छन् । यस्तोमा सबै नागरिकले खोपका लागि सरकारविरुद्ध अभियान नै चलाउनुपर्ने देखिएको छ ।